Maitiro Ako Ungashandure Kutungamira Mukutengesa | ECommerce nhau
Ichokwadi kuti mhedzisiro yakawanda haizoshanduke yotengesa, saka ivo vachatoda rumwe rubatsiro. Pane zvimwe zvinhu zvinogona kuitwa kushandura vese vangangove vatengi vanoshanyira yako Ecommerce mukutengesa.
2 Iva neakanakisa FAQ peji
3 Tsanangura muganhu wenguva
5 Email kushambadzira
Vanhu vanoda zvemahara zvinhu uye nekudaro iri nyore uye inokurumidza nzira Kushandura angangove mutengi kuita zvekutengesa ndiko kuvapa chipo kana kuvapa chakakosha dhisikaundi yekuva kwavo kwekutanga kutenga. Uku kudzikisira hakufanirwe kunge kuri kwekuwedzeredza kana kukosha-kwepamusoro, kungo kupihwa mahara kana kushomeka-yenguva-dhisikaini isingamisike.
Iva neakanakisa FAQ peji
Vazhinji vangangoita vatengi havashanduki vatengese nekuti havawani mhinduro dzemibvunzo yavo. Naizvozvo, kana paine peji hombe Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo, mutengi anogona kuve neruzivo rwakakodzera kuti atore danho rekutenga chigadzirwa.
Tsanangura muganhu wenguva
Gadzira a Nguva yakatarwa yekubvisa chero kutaurirana neuyo anogona mutengiIyo zvakare yakanaka nzira yekuvakurudzira kuti vatenge. Semuenzaniso, unogona kutumira email inotaura kuti ivo havana kumunzwa kubva kwaari mumazuva makumi matatu uye kuti uyu meseji ndiyo yekupedzisira kutaurirana. Kazhinji, izvi zvinotsamwisa maitiro mumunhu uye kana zvisiri, saka zvinodzivirira kurasikirwa kwenguva kwechikwata chekutengesa.
E-mail inokurumidza kana foni Kubvunza vangangoita vatengi kana vaine chero mimwe mibvunzo inowanzo konzera kutenga kwekuita. Iyo inoshanda nzira yekukurumidza kushandura inotungamira mukutengesa nguva isati yapfuura.
Pakupedzisira, usakanganwa kuti iyo tsamba yekutengesa inofanira kumira uye isingatarise chete ruzivo rwekutengesa kana rwekusimudzira. Iyo yakanaka zano kukwezva kutarisisa kwevanogona kuve vatengi neruzivo rwekuda nezve iyo kambani kana chigadzirwa zvibatsiro, ndokuti ruzivo rwunogadzira kufarira kwavo uye runoita kuti vadzokere kunzvimbo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Maitiro ekushandura anotungamira mukutengesa
Chii chinonzi kushambadzira otomatiki?